Wana Rubatsiro Kurega - 802Quits
Vermonters NDINODA KUREGA Wana Rubatsiro Kurega
Yakagadziriswa uye inoshanduka nzira dzekusiya kune Vermont vagari.
Pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita kunatsiridza mikana yako yekubudirira kurega fodya, e-fodya kana zvimwe zvigadzirwa zvefodya. Kushanda neVermont Kurega Partner kana Quitline Kochi pa1-800-KUSVIRA-IZVO kunowedzera mikana yako yekubudirira kurega, kunyanya kana ukabatanidzwa nekusiya mishonga. Ndosaka yega yega ichisiya chirongwa ichipa ZVEMAHARA zvigamba, chingamu uye lozenges uye inokubatsira iwe kuvaka yakarongedzwa kurega chirongwa. Kana iwe wakamboedza nzira munguva yakapfuura iyo isingashande, funga kuyedza imwe.
Sezvo iwe uchifunga nezve kurega kuputa, kuputa kana imwe fodya, uri kushamisika kuti ndeipi fomu yekuwedzera rutsigiro yakakunakira iwe? Hezvino izvo zvaunogona kutarisira kubva kune yega yega mhando yekurega rubatsiro.
BATSIRA RUBATSIRO Nyoresa ikozvino:
Inofanira kunge iri Vermont inogara makore gumi nemasere kana kupfuura Kukodzera kunozoonekwa pakunyoresa. Mimwe mamiriro anoshanda.